Kulan daryeelka naafada looga hadlayay oo Muqdisho lagu qabtay – Radio Muqdisho
Kulan daryeelka naafada looga hadlayay oo Muqdisho lagu qabtay
Wasiirka wasaaradda howlaha guud, guriyeynta iyo dib u dhiska dalka ayaa maanta ka qeybgalay kulan looga hadlaayay sidii dadka naafada ah loogu sameyn lahaa meelo ay galaan dhismiyaasha ayagoo wata baaskiilada looga talagalay dadkaasi.
Kulanka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay urur ay leeyihiin dadka naafada ah ayaa waxaa sidoo kale ka qeygalay Engineero iyo qaar kamid xubnaha ururkaasi.
Maxamed Cali Faarax oo kamid ah mas’uuliyiinta hey’ad u dooda dadka naafada ah isla markaana isaga qudhiisa naafo ah ayaa sheegay in dhismiyaasha qaar loo sameeyay meelaha ay ka gali karaan dadka naafada ah, isagoo dadka howshaasi sameeyay ugu mahaceliyay talaabada ay qaadeen.
Guddoomiyaha hey’adda SOSHANSA C/laahi Maxamed Shirwac oo kamid ahaa dadkii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay in lagu wacyigeliyo sidii arintan ugu baraarugi lahaayeen.
Wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya Eng. Saalax Sheekh Cismaan ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay tixgeliyaan baahiyaha ay qabaan dadka naafada ah.
Arintan ayaa ka dambeysay markii dhowaan magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay olole dadka Soomaaliyeed loogu sheegaayo in goobaha ganacsiga loo sameeyo meelo dadka naafada ah ay ka geli karaan ayagoo aan u baahneyn in qof kale uu caawiyo.
Taliyaha Boliiska oo maanta gaaray Baydhabao
Kulan ku saabsan dib u habeynta Sharciga maalgashiga dalka oo Muqdisho lagu qabtay